Korea Atsimo : Ireo Sary Avy Amin’ny Hetsi-panoherana “Bodoy i Wall Street” Tao Seola · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Oktobra 2011 8:08 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Svenska, বাংলা, Español, English
Ilay hetsika “Bodoy i Wall Street” dia natao tao an-drenivohitr'i Korea atsimo ao Seola. Na dia teo aza ny orambe mikija, ny tselatra sy ny kotroka, ary ny fidinan'ny mari-pana tampoka, dia olona teo amin'ny 300 teo ho eo no tonga tamin'ilay hetsi-panoherana “Bodoy” tao Seola ny faha 15 Oktobra 2011. Voalohany aloha nivory teo ivelan'ny birao mpanara-maso ara-bola tao Yeoido izy ireo, ny sampan-draharaha ara-bola ao Seola ary avy eo nanao dia be ho any amin'ny toeran-kafa tany amin'ny tanànan'i Seola.
Ny tontolon'ny twitter dia henika bitsika sy sary maro nalefan'ny tanora sy mafana fo maro izay nanohitra ny tsy fitovian'ny ho enti-manana. Ny sary sasany koa dia nampiakarina [ko]tao amin'ny Wiki Tree, vohikala famoaham-baovaon'ny mponina anaty aterineto ao Korea Atsimo.
Min Gyeong-chul (@mgc0909) dia nandefa bitsika mahakasika sary maro momba ilay hetsi-panoherana. Amin'ity sary manaraka ity, ny “lohateny kely”[ko] dia mivaky toy izao, ” eto anoloan'ny Foibe fanaraha-maso ny vola izahay izao. Avy be ny orana ary misy tselatra, kanefa isika, ny 99% dia mijoro manoloana ny fanararaotana ara-bola ataon'ireo 1%. ‘ Bodoy Yeouido ao Seola!'”.
Nampiakarinà mpampiasa Twitter @mgc0909
Indro misy sary hafa nalainy avy ao Yeiodo :
Ity sary manaraka ity dia avy aminà “sit-in” nataon'ireo niharan'ny tsy fahombiazan'ilay banky Busan Savings . Nisy tsy fahamendrehana lehibe naely ankarihary nilazana fa ilay banky fitahirizana dia nampiasa vola maloto mba hanohanana ny fampielezan-kevitry ny mpitondra sy ny mpanao lalàna mba hanaronana ny tsy fanarahan-dalàn'izy ireo.
Huh Jae-yeon (@welovehani),mpanao gazety ary mpandefa bitsika arahin'ny olona maro indrindra ao Korea Atsimo, nampiakatra sary iray fahitàna olona manao saron-tava ‘V for Vendetta’ na ‘V ho Valifaty’. Toy izao ny fivakin'ilay “lohateny kely”, ‘Nisy olona iray tonga mba hanaitra ny sain'ireo fikambanana tenda-kanina ara-bola ao Yeoido ireo .’
Nampiakarinà mpampiasa Twitter @welovehani
Nanao izay hanakànana ilay hetsi-panoherana ireo polisy tao Seola. Mpampiasa Twitter @Bwolf96 tweeted [ko] :
Araky ny efa nampoiziko…nanao izay hanakànana ny hetsi-panoherana “Bodoy i Wall Street” izy ireo, ary nilaza fa ara-dalàna ny ataony. Maninona isika no tsy afaka manao izany nefa izao tontolo izao manao ?
Tsy mahagaga, ny haino aman-jery mpitahiry ny mahazatra ao Korea Atsimo dia nanakiana be fahatany ilay hetsika ho mikonokonona zavatra ambadika, ka misy ambadika politika. Oh Jun-gyu (@ojkpop) nandefa bitsika [ko] ho fanoherana izany fanambarana izany :
Rahoviana ireo haino aman-jery mpiaro ny mahazatra ireo vao hampitsahatra ny tabataba ! antsoin'izy ireo hoe hetsika (mahantra) tsotra izao ilay hetsi-panoherana “Wall Street”, raha etsy ankilany manakiana ny “Bodoy” ao Seola amin'ny ‘fitarihana ahitana (ambadika) katsahina’. Hitanao, ilay hetsi-panoherana “Wall Street ” dia hetsika ‘ara-politika’ mangataka ny andoavan'ny manankarena hetra ary mba hisian'ny rariny eo amin'ny fiarahamonina . Ary marina ny an'izy ireo. Izany no ” Bodoy i Seola”.
Na dia izany aza , misy ireo tanora izay tena nanakiana mafy ny hetsi-panoherana “Bodoy i Seola” , amin'ny fanazavana fa ny ” Bodoy Wall Street” any Etazonia sy ny “Bodoy” ao Seola dia toy ny paoma sy voasary [ko]. Ny sasany aza lasa lavitra mihitsy ary nampiakatra avo ny ompany . Oh mi-mi (@Mimi_nuna) nandefa bitsika hoe [ko]:
Ianareo mpanao heloka be vava mpanao ny hetsi-panoherana “Wall Street”! Ianareo no olona voalohany nilaza fa ‘ mpanohitra an'i Amerika, mpanohitra an'i Amerika hatrany hatrany. Kanefa ianareo no mandika ny ataon'i Amerika ary ankehitriny dia mandika ny hetsi-panoherany ianareo ? Izany no anton'ireny fitondrana anareo tsy mitovy ireny any amin'ny faritra maro, Faty mitsangana ianareo!
Namaly tamim-pisainana kosa ny sasany, nanazava fa na dia ilay hetsi-panoherana ihany aza dia efa misy dikany, ary dia vitsy amin'ireo mpandray anjara no mahazo ny foto-kevitra ho entina amin ‘ilay izy. Rhee Woong (@Rhee0403) nibitsika hoe [ko]:
Ao Korea Atsimo, na ny mponina izay manohana tsy ampihambahambana ilay hetsi-panoherana “Wall Street” aza, dia tsy tena mahazo tsara ny programan'ilay hetsi-panoherana. Ny olona sasany nandray izany ho toy ny fanoheran'ny havia ny “kapitalisma”. kanefa dia mihoatra noho izany ilay izy. Ady goavana teo amin'ny olon-tsotra sy ny olona manan-katao ilay izy. Resaka fahavelomana sy fahafatesana ilay izy raha ho an'ireo olon-tsotra ireo.
Ny fikambanan'ireo mafana fo dia nilaza fa hisy hetsi-panoherana “Bodoy” hafa indray ao Seola izay ho karakaraina ny 21 Oktobra 2011.